> Resource> iPhone> Jikwaa Photos on iPhone: Tinye / Export / Import / Hichapụ Photos
Haven iwere multiple photos na gị iPhone na-ekpebi mbupụ PC? Foto gị iPhone bụ imetosi, otú ị chọrọ ka ha iji? Ma ọ bụ na ị dị nnọọ kpebie gbakwunye foto ọhụrụ gị iPhone. Iji jikwaa foto na iPhone mfe, ị pụrụ ịgbalị ihe iPhone njikwa dị ka Wondershare TunesGo Ochie (n'ihi na Windows ọrụ) ma ọ bụ Wondershare TunesGo Ochie (Mac) (n'ihi na Mac ọrụ). Nke a na usoro ike gị ịgbakwunye, bupu ma hichapụ iPhone foto na ogbe.
Download TunesGo Ochie jikwaa iPhone photos mfe!
Cheta na: ma nsụgharị na-arụ ọrụ yiri nke ahụ. N'ebe a, anyị na-Windows version dị ka ihe atụ.
Jikọọ iPhone na kọmputa na-agba ọsọ MobileGo
Jikọọ gị iPhone na kọmputa site na eriri USB. Wụnye na-agba ọsọ TunesGo Ochie na kọmputa gị. Nke a na usoro arụ ọrụ nke ọma na kọmputa na-agba Windows 8/7 / XP / Vista. Mgbe ahụ, gị iPhone ga-ahụrụ ozugbo.
Jikwaa iPhone foto: transfer foto iPhone
Ugbu a, pịa "Photos" ke hapụrụ kọlụm iji bugote foto management window. Iji tinye foto iPhone, nke mbụ niile, ịhọrọ album, dị ka Photo Library, na gị na iPhone ịzọpụta dị photos. Ma ọ bụ, pịa "Tinye" ike ọhụrụ album. Mepee album. Pịa "Tinye" ọzọ. Chọta gị chọrọ foto na mbubata ha.
Jikwaa photos iPhone: bupu foto na igwefoto Roll na Photo Library
Ọ bụrụ na ị zọpụta multiple foto na igwefoto Roll na Photo Library na gị iPhone, ị nwere ike mbupụ ha na kọmputa. Họrọ gị chọrọ album, dị ka Photo Library, na pịa "Export ka". Mgbe ahụ, họrọ otu ọnọdụ na kọmputa gị ịzọpụta exported album. Mgbe ahụ, a usoro amalite mbupụ album.
Ọ bụrụ na ị na-ekpebi mbupụ photos. Dị nnọọ emeghe album ma họrọ photos na ị ga-mbupụ. N'otu aka ahụ, pịa "Export ka". Mgbe faịlụ nchọgharị window Pop elu, ịnyagharịa na ọnọdụ ebe ị chọrọ ịzọpụta photos.
Jikwaa iPhone foto na PC: ihichapụ foto na igwefoto Roll na Photo Library
Mgbe gị iPhone photos zaa, ị nwere ike ihichapụ ha ozugbo. Imeghe album, dị ka Photo n'ọbá akwụkwọ. Họrọ foto na ị na-achọghị na-ọ bụla ọzọ. Wee pịa "Hichapụ". Ọ bụrụ na ị nwere ụfọdụ albums na ị mepụtara na a usoro, ị nwekwara ike ihichapụ ndị a albums.
iPhone foto management: nyefee photos n'etiti iPhone, iPad na iPod
Ọ bụrụ na ị nwere ọzọ iPhone ma ọ bụ onye iPad ma ọ bụ iPod, ị nwekwara ike nyefee photos n'etiti ha. Jikọọ gị iPhone na ndị ọzọ na Apple ngwaọrụ na kọmputa n'otu oge. Mgbe ahụ, a na-egosi omume ha na isi window. Gị iPhone foto management window, họrọ photos na pịa triangle n'okpuru "Export ka". Na ya ndọpụta ndepụta, họrọ mbupụ foto gị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod.
Cheta na: ugbu a, i nwere ike na-nyefee photos n'etiti iPhone, iPad na iPod na Windows version. Ọ bụrụ na ị chọrọ ime ya na Mac version, ị nwere ike mbụ mbupụ foto site na otu iDevice na kọmputa, mgbe ahụ, Ikwupu a iDevice na jikọọ ọzọ iDevice na kọmputa. Mgbe ahụ, mbubata foto ndị a na ya.
Common Nsogbu na Solutions Banyere nbudata ngwa ọdịnala na iPhone